China 24kV 200A Bushing Fanye ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anhuang
Anhuang ọkachamara na Ọrụ ntinye, anyị na-enye elu mma Bushing wet. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC.
24kV 200A Bushing tinye eriri n'ime igwe na-agba ọsọ nke ọma iji nye otu ọrụ ahụ dị ka ihe na-agbaji ịkụcha ihe. Iji ntinye ntinye na-eme ka ntinye na ngbanwe dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ntinye na ntughari aka na-ejikọ ihe dị mkpa nke njikọ njikọta niile. Ihe ntinye nke ntanye na-eji ụzọ dị ugbu a mara mma, nke nwere naanị otu ụzọ ntụgharị ugbu a, n'ime ntinye n'onwe ya. Thedị mgbagwoju anya nke ụzọ ụzọ dị ugbu a na-anapụta arụmọrụ dị elu, nke a pụrụ ịdabere na ya.
Achịcha dị n'ime na-enye ohere maka nrụnye nchịkwa dị mma. Iji ihe ntinye nhọrọ nke ihe eji eme ihe, enwere ike itinye ihe ntinye nke ọma n'ime ohia nke oma n'enweghi egwu nke itughari ahihia nke oma. Ike na-egosi mgbanaka akara aka, nke dị na akara nke okpokoro bushing, na-ewepụ nkọcha nke nrụnye ikikere ikpere aka nke ntinye ntinye.
Ihe mgbanaka na-acha odo odo na-enye nzaghachi ozugbo iji chọpụta ma ikpere aka arụ ọrụ nke ọma na ntinye.
A na-akpụzi nkwonkwo casing na-agafe site na iji mkpuchi dị elu nke sọlfọ siri ike na nke ọma EPDM roba. Mgbe ị na-eji akụrụngwa ejiri ihe atụ tụnyere ya, ntinye ntinye na-enye njikọ zuru ezu ma na-ekpuchi mmiri maka ọrụ nkwụsị ọrụ.
1.INSULATION: Ogologo, EPDM roba a gwọrọ nke peroxide, nke a gwakọtara ma kpụzie n'ime ụlọ maka ịrụ ọrụ ubi na-agbanwe agbanwe.
2.LATCH ihe ngosi mgbanaka: Mkpụzi-na-egbuke egbuke odo mgbanaka ewepu ikiaka echichi guesswork site n'ịkwado a àgwà njikọ.
3.SEMI-CONTUCTIVE SHIELD: Ọdịdị EPDM dị elu na-enye ọta mkpuchi ihu nwụrụ anwụ na-ejide n'aka na ha nwere ala.
4.CONTACT HOLDER: Ọla kọpa mpaghara na-enyefe ugbu a si pistin-kọntaktị ka bushing ọma stud.
5.TRER B isi: 3/8 ”-16 UNC ọla kọpa eri nye njikọ bushing ọma stud.
6.HEX BROACH: 5/16 "hex broach na-enye ohere itinye nrụnye na-agbanwe agbanwe na ngwa ọrụ.
7.GROUNDING ANYA: A na-eme ka taabụ atọ dị na ọta nke na-eduzi ọkara maka mgbakwunye nke eriri ala iji nọgide na-enwe nchebe n'ihu ndị nwụrụ anwụ.
8.ARC SNUFFER Mgbakọ: Arc-ablative plastic na-emepụta arc na-agbanyụ gas n'oge arụmọrụ nkwụsị ọrụ.
9.SEMI-CONTUCTIVE SHIELD INSERT: qualitydị mma EPDM dị elu na-enye ike igwe na mkpuchi eletriki edo.
200A 24kV Ntinye Ntinye AH DTT-24/200 24kV 200A
Nke gara aga: 15kV 200A Rotatable Feedthru Fanye
Osote: 15kV 200A na-agba ọsọ
15kV 200A Extended gwara mmanụ Loadbreak Bushing ...